वाशिंगटन राज्य गृह मालिक सहायता कोष - चाँडै आउँदैछ
मद्दत उपलब्ध छ। आज WHRC लाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
2021 को अमेरिकी उद्धार योजना ऐनले महामारीको कारण आर्थिक कठिनाइ भोगेका घर मालिकहरूलाई मद्दत गर्न सबै राज्यहरूलाई फोरक्लोजर रोकथाम सहायता कोष निर्देशन दिएको छ। कोष वाशिंगटन घर मालिकहरूको लागि चाँडै उपलब्ध हुनेछ, तर कारबाही गर्न पर्खनुहोस्!
ए बाट मद्दत लिनुहोस् आवास सल्लाहकार जसले तपाइँको विशिष्ट अवस्थाको समीक्षा गर्नेछ र समाधानहरूमा सुरु गर्नेछ।
यदि तपाइँ पहिले नै फोरक्लोजरमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई आफ्नो घर राख्न मद्दत गर्न कोषहरू अहिले उपलब्ध हुन सक्छन्।
हाम्रो हटलाइनमा कल गर्नुहोस् (877-894-4663)
के तपाईलाई अहिले मद्दत चाहिन्छ? हाम्रो हटलाइन नम्बर वा अनलाइन सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
के तपाईंले ट्रस्टीको बिक्रीको सूचना प्राप्त गर्नुभएको छ? के तपाइँ कर लियन फोरक्लोजरको सामना गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँको HOA वा COA पूर्व बन्द गर्न धम्की दिदै छ? यदि तपाईं यी कारणहरू (वा अन्य कारणहरू) को कारणले फोरक्लोजरको आसन्न खतरामा हुनुहुन्छ भने, कृपया WHRC लाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुहोस्! HAF पायलट कार्यक्रम अहिले उपलब्ध छ र सक्रिय फोरक्लोजरमा योग्य घर मालिकहरूका लागि $60,000 सम्म प्रस्ताव गर्दछ।
पायलट कार्यक्रमबाट मद्दत प्राप्त गर्न, WHRC लाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हाम्रो हटलाइन (877-894-4663) मार्फत वा हामीलाई यहाँ सन्देश गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई कल गर्नेछौं।
Even without the Homeowner Assistance Fund, Washington state offers नि: शुल्क मद्दत संघर्षरत घर मालिकहरूको लागि उपलब्ध। प्रतीक्षा नगर्नुहोस् - आज WHRC लाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
प्रायः सोधिने HAF कार्यक्रम प्रश्नहरू
घर मालिक सहायता कोषको बारेमा
मार्च 2021 मा, कांग्रेस पारित भयो र राष्ट्रपति बिडेनले यसलाई लागू गर्नुभयो अमेरिकी उद्धार योजना ऐन (ARPA), जसमा COVID-19 महामारीको कारणले आफ्नो आवास सम्बन्धी भुक्तानीमा पछाडि परेका घरधनीहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न घरमालिक सहायता कोष (HAF) समावेश छ।
वाशिङटनले घरधनी सहयोगका लागि यस कार्यक्रम अन्तर्गत $173 मिलियन प्राप्त गर्नेछ। वाशिंगटन राज्य आवास वित्त आयोगले वाशिंगटन राज्य भर HAF कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नेछ। वाशिंगटनको आधिकारिक होमओनरशिप हटलाइनका अपरेटरहरूको रूपमा, WHRC ले कार्यक्रमसँग जडान हुन चाहने घरधनीहरूका लागि प्राथमिक प्रवेश बिन्दुको रूपमा काम गर्नेछ।